यहाँ ७० वर्षको महिलालाई पनि देखिन्छ १७ वर्षको जस्तो , यस्तो छ सुन्दरताको राज !
फागुन २३, २०७४ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ: – के तपाईलाई यस्तो एक ठाउँको बारेमा थाहा छ जहाँ ७० वर्षको उमेरमा पनि महिलाहरु कुनै अप्सरा भन्दा कम देखिदैनन…? यदि थाहा छैन भने हामी तपाईलाई त्यस ठाउँको बारेमा बताउन गईरहेका छौं जहाँ महिलाहरु ७० वर्षको उमेरमा पनि एकदम जवान देखिन्छ।
दुनियाँमा अनेक प्रकारका जनजातिहरु पाईएको छ, ती मध्ये एक हो ‘हुन्जा जनजाति’ । एक मिडिया रिपोर्ट अनुसार यस जनजातिका महिलाहरु लामो समयसम्म अत्यन्तै सुन्दर र निकै जवान देखिन्छ।
यो हुन्जा जनजाति पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरको गिलगिट इलाकामा बसोबास गर्छन। यहाँको हुन्जा उपत्यका यिनै जनजातिको आवासको लागि प्रसिद्द छ र उक्त उपत्यकाबाट नै ती जनजातिहरुले आफ्नो पहिचान पाएका छन्।
यी जनजातिका महिलाहरुको बारेमा सबैभन्दा विशेष कुरा यो छ कि ६५-७० वर्षको उमेरमा पनि ती महिलाहरुले बच्चाहरुलाई जन्म दिन सक्छन ।यस जनजातिका मानिसहरु कमै मात्र बिरामी हुन्छन। उनीहरुको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अधिक भएको पाईएको छ।
एक रिपोर्ट अनुसार हुन्जा जनजातिका मानिसहरु १०० वर्ष भन्दा बढी बाच्छन। उनीहरुको दिर्घायु हुनुको राज खानालाई मानिएको छ। तिनीहरुको मुख्य भोजन कागुनी, कोदो, आरु, र मेवा आदि हुन्। तिनीहरुले यसको सेवन अधिक मात्रामा गर्छन। यसकारण तिनीहरु सधैं स्वस्थ रहन्छन।
तिनीहरुले आफै अन्न उत्पादन गरी खान्छन। तपाई यो थाहा पाएर आश्चर्यचकित पर्नुहुनेछ कि तिनीहरु शुन्य डिग्रीको तापमानमा पनि ठण्डा पानीले नुहाउछन। तिनीहरुको सुन्दरताको रहस्य खान-पान र जीवनशैली हो। तिनीहरु अलेक्जेन्डर दी ग्रेटलाई आफ्नो वंशज मान्छन। एजेन्सी
प्रकाशित : बुधबार, फागुन २३, २०७४१८:४७